Parkitect Beta 7: kugadzirisa mashandiro uye dzimwe nhau | Linux Vakapindwa muropa
Parkitect mutambo wevhidhiyo izvo zvatagara tinazvo muBeta 7 vhezheni iyo yakaburitswa uye kuti kunyangwe chikamu chayo chekutanga chekuvandudza chaunza hushamwari hwakawanda pakati pevazhinji vateveri vayo, kunyanya kubva kune vanoda mapaki enhandaro avo vava nemukana wekutora manejimendi vavo vari padhijitari. Uye zvakare, mukuburitswa kutsva uku kune kumwe kuvandudza kwekuita zvichienzaniswa neshanduro dzakapfuura uye nedzimwe nhau dzinonakidza dzatichazotaura nezvadzo.
Parkitect ndeye chivakwa chepaki yekuvaka simulator iyo, kunyangwe ichiri muBeta vhezheni, yave kutosvika musi wayo wekuburitsa mune yayo yekupedzisira vhezheni. MuBeta 7 vagadziri vayo vakatarisana nekuita kuti vatenderi vashanyi mupaki vasina kukonzera matambudziko sepakutanga. Pamusoro pezvo, mashandiro evashanyi aya ari nani kana vachipinda mukati nekubuda munzvimbo dzakazara kana mutambo uchimhanya pa x2 kana x3 kumhanya. Uye zvakare, iyo yekukodha nguva iri zvakare zvishoma zvishoma ...
Mimwe mwenje yakawedzerwawo kuti ipake imwe nzira inoshamisira uye inokwezva, kukwezva kutsva kweGyro Drop Tower kwakawedzerwa, kurira kwemutsva kuwedzera kune aripo, chinangwa chitsva, chakawedzerwa. yakabvisa zvimwe zvipembenene zviripo mukuburitswa kwapfuura, Uye muchidimbu, ivo vakaita mutambo wakanyanya kutaridzika kune vatambi, uchivabvumidza kuti vazorore vasina matambudziko aya uye vagadzire zvinhu, vacherechedze mashandiro uye vaagadzirise neiri nani mushandisi ruzivo.
Chokwadi iyi Parkitect inowanikwa yeiyo GNU / Linux distros, yatinogona kunakidzwa nayo. Kana iwe uchida rumwe ruzivo iwe unogona kubvunza yako zviri pamutemo webhusaiti. Uye kana iwe uchida kuona iyo Valve's chitoro peji, chiutsiIwe unogona zvakare kuzviita kubva kune imwe iyi link yatinokusiira iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Parkitect Beta 7: kugadzirisa mashandiro uye dzimwe nhau
Ubuntu Budgie Remix 16.04 inosvika kumagumo muna Nyamavhuvhu 2018